Karman Mawiricheya uye Shop | Chinyorwa Wiricheya
BEST VHIRIKI BRAND NEMAHARA Sarudzo KUSVIRA 1994
hwiricheya Kugadzira uye Kurapa Kupa Online Chitoro: Mawiricheya, Zvisingaremi, Ultra Zvisingaremi, Simba Rakamira, Manual Wheelchairs, Transport Wheelchairs, Electric Wheelchairs, Rollators, Vanofamba uye Mawiricheya Anoshanda anotumirwa iwe chaipo. Zvakare, zvakanaka wiricheya inofanirwa kugadzira upenyu hwako nyore. Naizvozvo, isu tine hunyanzvi mu ergonomics uye isina huremu. Kunaka kuburikidza Mobility kuzvipira kwedu kwauri!
Ultra Lighweight Wiricheya
Karman ndiye anotungamira nyika inogadzira mawiricheya
Karman Healthcare anga ari mugadziri anotungamira mukugadzira uye kugovera zvigadzirwa zvekurapa kumba kubvira 1994. Tine mamwe emacheya akanakisa. Nekuda kweizvozvo, Karman anopa yakazara tambo yemagetsi uye emawiricheya emawoko, vanofamba, rollators, & scooter, oksijeni zvinodzora, chengetedzo yekugezera uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba. Naizvozvo, tenga izvozvi uye chengeta! We dzidzira ose marudzi kufamba zvigadzirwa. Mawiricheya edu anokupa iwe chiitiko chisina kufananidzwa nemakwikwi. Taura nevashandi vedu vane ruzivo nhasi kana iwe uine chero mubvunzo kana zvinonetsa. Tsvaga kuti nei edu epamutemo ergonomic zvigaro ari maindasitiri anotungamira matsva ekunyaradza!
Chinyorwa uye Simba Kumira Wiricheya
Karman® inopa anopfuura zana zana emhando dzemawiricheya aunogona kusarudza kubva. Semutungamiri muindastiri, isu tinopa dzakasiyana siyana Manual Wiricheyas, kusanganisira Kutakura Wiricheyas, Wiricheya Yakajairwas, Wiricheya isingaremis, Ultra Lightweight Wiricheyas, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda. Naizvozvo, isu tiri pano kune ako ese kufamba zvinodiwa. Kusarudza chikamu, modhi, ruvara kana kunyange mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kuti anyatsonzwisisa yedu "mamiriro eunyanzvi" kufamba zvigadzirwa. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System. Takazvipira kutsvaga ou chigaro chakakwana. Nekuda kweizvozvo, isu takatsaurirwa kune yako kufamba zvinodiwa. Tarisa uone yedu Kumira Wiricheya uye yazvino tech. Tsvaga cheya chepamusoro pane zvako zvaunoda.
Kutenga yedu VHIRIKI Chitoro - Wiricheya isingaremi
KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Pakati pese, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa iwe muvhiri-cheya, iwe uchazoda iyo yakanyanya kureruka kugadzikana-vhiri-cheya inowanikwa. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nechigadzirwa uremu uye bhajeti. Zvigaro zvese zvinogadzirwa zvakasiyana. Saka, ivo vese vakasarudzika munzira yavo. Kutenga chigaro cheKarman kwakafanana nekutenga tsika chair. Isu tine yakasarudzika sarudzo kubva kune chero chitoro. Ngatitangei mukutarisa. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako:
Mazhinji akajairika uremu-mavhiri-magaro anotanga pa34 mapaundi. Izvi zvingave standard weght vhiri-cheya. Iyi sarudzo hombe kana iwe uchida vhiri-chigaro chisingazoshandiswe kazhinji. Kazhinji, maawa matatu kana mashoma pazuva uye nekuchinja kusingawanzo kuitika. Iyi ingave iri mhando yaunoona kuairport kana kuzvipatara. Chekupedzisira, hapana mafrills uye chimwe chinhu chakakosha. Izvo zvakarairwa nachiremba. Sarudzo yedu izere inowanikwa kubva kumamodeli akakosha ane zvigaro zvakagadzika uye zvigaro zvemaoko kune mawiricheya ane sarudzo yekusimudza magaro emakumbo uye zvigaro zvinobviswa. Isu tinopa zvipatara uye nhandare saka usasimudzwa kana ukaona imwe ipapo. Dzimwe nguva chigaro chekutanga ndizvo zvese zvaunoda. Kunyanya kana chiri chidimbu chenguva pfupi. Kune zvakare mamodheru ane zvimwe zvekushandisa zvekusimudzira yako vhiri-cheya. Maputi efuro uye / kana Gel Makushoni kupa kune imwe nyaradzo.
Uyezve, nezviyereso zvakatangira pa25-34 mapaundi, yedu lightweight vhiri-cheya isarudzo huru kana iwe uchida vhiri-cheya iro rinonyanya kushandiswa, kana iwe uchida sarudzo dzakasarudzika, kana kana iwe uine moyo wako wakaiswa pane yakatarwa furemu uye / kana upholstery ruvara musanganiswa. Ichi chikamu chinozvifukidza zvese, nehuremu-mavhiri-zvigaro pamakwikwi mitengo. Kubuditswa neizvi, aya mavhiri-magaro anopa zvimwe zvingasarudzwa uye isu tinowanzokurudzira kuti fananidzo iitwe neinotevera nhanho kumusoro chikamu icho chiri chedu ultralight uremu vhiri-zvigaro uko kwekupedzisira kufamba zvishandiso uye maficha ari pakanyanya kwazvo.
Kudzokera kumashure kana kuti zvimwe kuzivikanwa se "musana wepamusoro" VHIRIKI iri sarudzo hombe kune avo vanopedza yakawanda yenguva yavo muwiricheya sezvo ichipa zvimwe zvinzvimbo zvekugara. Uye a kurereka-chigaro inopa kumwe kumisikidza uye kumanikidza kuregererwa kune avo vari kuda kumanikidzwa kumanikidzwa kwekushandisa kwenguva yakareba kwea VHIRIKI. Chaizvoizvo, ese mapoka edu akanyatso kuderedza huremu hwevakwikwidzi vechinyakare. Ipapo, ita shuwa yekuchengeta izvi mupfungwa kana uchitenga pamutengo. Zvinhu zvekuvhenekesa senge ndege yegiredhi aluminium ndizvo zvatinoshandisa.
Bariatric Wheel-macheya ane yakanyanya kurema kapu yemazana mazana mapaundi, aya rinorema basa vhiri-zvigaro inogona kugara chero chero mushandisi ane yakanyanya chigaro upamhi of 30 ″ paupamhi. Karman anotakura yakazara yakazara ye basa rinorema mawiricheya, kubva kune mari bariatric kutakura mavhiri-zvigaro, kuti yakaoma zvikuru-inogadziriswa / echinyakare mamodheru. Isu zvakare tine yakareruka kurema bariatric vhiri-chigaro muindastiri kune chigaro chayo hupamhi uye huremu chivharo.
Kumira pawiricheya-chigaro ndechimwe chezvinhu zvine simba zvigadzirwa zvatakagadzira nekugadzira mukuedza kwedu kubvumira iyo kufamba vasina simba kutora hupenyu hwavo kudzokera mumaoko avo. Zvisinei, hatina kumira nekungobvumira vanhu kumira muwiricheya; isu takaita kuti ive inokwikwidza zvakanyanya mutengo chigadzirwa muchikamu chayo kutyaira hupfumi kupinda mazuva ese imba inobata. Zvakadaro, verenga zvakawanda pane zvese zvinobatsira, masosi emari, uye sarudzo dzemari kana iwe uchifarira vhiri rako-cheya rinokubatsira kumira. Iwe fara kuti wakazviita. Kana tarisa yedu youtube vhidhiyo. Tine indepth chigadzirwa wongororo. Isu tinewo zvakapusa ongororo pamusoro pavo futi.